Fiakaran’ny rano, fihotsahan’ny tany: Iray maty, iray hafa naratra, 788 traboina | NewsMada
Fiakaran’ny rano, fihotsahan’ny tany: Iray maty, iray hafa naratra, 788 traboina
Ankoatra ilay ramatoa naratra, nianjeran’ny trano teny Manjakamiadana, vehivavy iray hafa koa namoy ny ainy, nirodanan’ny trano fonenany, teny Ambolonkandrina. Ho an’Antananarivo Renivohitra, mahatratra 788 izao ireo traboina noho ny fiakaran’ny rano…
Iria-maha ory ny orana ! Tsy mitsaha-mitombo ny voka-dratsy ateraky ny rotsak’orana tato ho ato. Isan’ny lasibatra voalohany amin’izany ny eto amin’ny faritan’Antananarivo renivohitra. Olona iray no namoy ny ainy ary mahatratra 801 ireo tra-boina amin’izao fotoana. Ny 788 tamin’ireo olona ireo izay voatery nafindra monina vonjimaika. Ho an’Antananarivo Atsimondrano, manampy trotraka ny fahasahiranan’ny mponina, ny fiakaran’ny rano. Voatery mamonjy toerana avo sy mifindra amin’ny fianakaviany ny mponina sasany. Ireo tsy misy aleha kosa, miandry ny fanampian’ny fitondram-panjakana no hany fanantenany.
Etsy an-kilany,voatery mifindra monina eny amin’ny toerana iva ny ankamaroan’ny mponina anatin’ny Boriboritany faharoa sy ny manodidina. Manoloana ny fisian’ny fihotsahan’ny tany eny amin’ny manodidina, tsy maintsy nandray andraikitra mialoha ny teo anivon’ny BNGRC. Tafakatra 13 ireo olona tsy manan-kialofana eny an-toerana ary trano miisa roa no simba tanteraka. Manampy trotraka ny fahafatesan’olona, vao niseho andro vitsy lasa tetsy Ambolokandrina sy ny faharatrana renim-pianakaviana iray tetsy Antsahondra Manjakamiadana. Manamarika iny faritra avo iny ny fihotsahan’ny tany rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao.
Vatobe milanja 100 taonina nihotsaka teny Andralanitra…
Nambaran’ny teo anivon’ny BNGRC hatrany fa vatobe nahina ho nihotsaka tamin’ny roa taona lasa no nihotsaka omaly antoandro teny amin’ny fokontany Tsarahasina Vohitra atsinanan’Andralanitra, kaominina ambanivohitr’Ambohimangakely. Araka ny tombantombana nampitain’ny BNGRC, milanja eo amin’ny 100 taonina eo ho eo ity vato ity. ny ora-mikija tato ho ato no nahatonga izany. Voalaza fa toeram-pitrandraham-bato ilay toerana satria misy mpamaky vato. Tsy nisy kosa ny maty na naratra na zavatra simba vokatry ny fihotsahana. Mandeha, araka izany, ny fanentanana ataon’ny BNGRC amin’ireo mponina manodidina eny an-toerana mba hifindra toeran-kafa. Olona miisa 291 sy trano 41 no tandindomin-doza amin’izao fotoana izao.
Tsiferana R. / J.C
Eco brèves 26/02/2021
Ambodiriana – RN5: début de travaux de réhabilitation de trois ponts 26/02/2021
Poissons d’eau douce: deux espèces endémiques ont disparu 26/02/2021
Riposte à la crise – Onudi: 10 entreprises et coopératives épaulées 26/02/2021
Fonds monétaire intenational: il y a une urgence à soutenir les secteurs sociaux 26/02/2021